Gabar Somali ah oo caalamka kula tartamaysa...! - Caasimada Online
Home Warar Gabar Somali ah oo caalamka kula tartamaysa…!
Gabar Somali ah oo caalamka kula tartamaysa…!
Sacdiyo Shariif Xasan oo ah hal abuurka Ganacsiga Basbaaska horumaray ee dalka Maraykanka, ayaa idaacadda goobjoog ee Muqdisho waxa ay uga sheekeysay qaabka ay shaqadaan ku billawday iyo sidoo kale waqti ay howlahan guda gashay, kuna darso horumarka ay gaartayna way ka hadashay.
1991-kii ayay ka baxday Magaaladda Muqdisho oo waxa ay gaartay Magaaladda Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo ay ugu noolayd muddo 7-sano ah si magan galya doon ah.
Daqiiqado ayay miyir baxday iyadoo gacanta ka haysa wiilkeda oo markaasi aad u yaraa, maadama ay la noqotay wax aan caadi ahayn iyadoo oo dhax joogta cariga Maraykan oo sheeko dhegood loogu sheegi jiray.
Waqti ka mid ah nolosheeda waxa ay wax ka baran jirtay Dugsiyadda dadka waawayn ee dalkaasi si ay u noqoto qof aqris-qoraalka dalkaasi taqaana.
Sacdiyo waa qof kasoo jeeda qoys sabool ah , laguna soo koriyay nolol hoose , markii ay timid Muqdisho sanadkaasi waxa ay aragtay dad ku kala nool dabaqad sare iyo mid hoose taas oo ay ii sheegtay in ay ka uur xumaatay.
“Wax soo saarkan waxa uu igu dhashay anigoo sajuudsan oo alle baryaya , ku oynaya ilaahayow murugadaan i haysata iga garab sii, Markii maskaxdayda uu ilaahay ku soo riday in aan basbaaskan oo horay aan ugu samayn jiray caruurtayda horumariyo , markiiba waan baxay gaarigayga ayaan ka xaystay waxaana aaday dukaamadda si aan u soo iibsado waxyaabaha laga sameeyo basbaska,markii aan soo iibiyay ayaan kariyay dabadeedna waxaan u qaaday dukaamadda , laakin dhibaato badan ayaan kala kulmay in aqoonsi aan helo waqti dheer ayayna igu qaadatay”
“Rafaad badan kadib , jikadii ayaan hadana si qoys ahaan u wada galnaa , gabadhayda , caruurteeda iyo aniga waan karinaa oo hagaajinaa, Odaygayga dublad ayuu kula shubaa dhaladda basbaaska , mid kale ayaa furka ku xira , kan kale wuu tirtiraa oo uu isku hagaajiyaa , gabadha kale ayaa kartuunadda ku ridda tan kale ayaa iyaduna sharootaynaysa , wiilka kale ayaa qaada oo u dhiga dukaamadda sidaas ayaan u wada shaqayn jirnay”